Tantara: Zazalahy Efatra Tany Babylona - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
NENTIN’I Nebokadnezara Mpanjaka ho any Babylona ny Israelita nahay indrindra rehetra. Avy eo dia noﬁdin’ny mpanjaka tamin’izy ireo ny zatovolahy tsara tarehy sy kinga saina indrindra. Ny efatra amin’izany ireo zazalahy hitanao eto. I Daniela ny iray, ary ny telo hafa dia ireo nantsoin’ny Babylonianina hoe Sadraka, Mesaka ary Abednego.
Nanam-pikasana hampiofana zatovolahy i Nebokadnezara mba hanompo ao an-dapany. Aorian’ny telo taona fampiofanana dia hiﬁdy ireo kinga saina indrindra ihany izy mba hanampy azy handamina zava-manahirana. Tian’ny mpanjaka ireo zazalahy mba hatanjaka sy ho salama eo am-pampiofanana azy. Koa nomeny baiko ny mpanompony mba hanome azy ireo sakafo sy divay matsiro mitovy amin’izay nohanin’ny tenany sy ny ﬁanakaviany.
Rehefa tapitra telo taona dia nentina teo amin’i Nebokadnezara ny zatovolahy rehetra. Taorian’ny ﬁresahana tamin’izy rehetra, dia hitan’ny mpanjaka fa i Daniela sy ny namany telo no kinga saina indrindra. Koa notazoniny ireo mba hanampy azy tao an-dapa. Ary isaky ny mametraka fanontaniana amin’i Daniela, Sadraka, Mesaka ary Abednego ny mpanjaka, na koa manome azy zava-manahirana sarotra, izy ireo dia mahafantatra impolo heny noho ny mpisorona na ny olon-kendry.
Ahoana no nahatonga an’i Daniela sy ny namany telo lahy ho tao an-dapan’ny mpanjaka? Tamin’ny laﬁny inona izy ireo no nanan-tombo noho ny mpisorona sy ny olon-kendry?
Ahoana no mety hahatonga ny tanora ankehitriny halaim-panahy, na hoteren’ny hafa hanaram-po amin’izay mety hoheverin’ny olona sasany fa ‘hanina’ tsara? (Dan. 1:8; Ohab. 20:1; 2 Kor. 6:17-7:1)
Ahoana no tokony hiheverantsika ny ﬁanarana any an-tsekoly, rehefa avy namaky ny tantaran’ireo tanora hebreo efatra isika? (Dan. 1:20; Isaia 54:13; 1 Kor. 3:18-20)